I-Casa de Serra Guaramiranga - I-Airbnb
I-Casa de Serra Guaramiranga
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCarlos Eduardo
UCarlos Eduardo yi-Superhost
Indlu ebethwa ngumoya, ekwimpuma, emva kwePico Alto . Imozulu ibanda kakhulu xa kuthelekiswa nesikwere , ngenxa yendawo ekuyo indlu kunye nokuphakama. Indlu yabo bafuna ukuzihlalela bodwa, baphumle, banoxolo oluninzi baze badibane nendalo . Indlu enkulu kakhulu enamagumbi okulala ayi-2 kumgangatho osezantsi inegumbi lokulala eliyi-1 (elinye), kunye ne-1 (elinye) i-Mezzanine eneebhedi ezimbini ezilala umntu omnye. Iflethi okanye indlu ekwicomplex uDom Victor .
(Ayivunyelwanga), ukusetyenziswa kwesandi esikhulu, isandi semoto kunye nebhokisi
ephucukileyo. Umgaqo-nkqubo weflethi okanye indlu ekwicomplex.
Indlu ebethwa ngumoya, ekwimpuma, emva kwePico Alto . Imozulu ibanda kakhulu xa kuthelekiswa nesikwere , ngenxa yendawo ekuyo indlu kunye nokuphakama. Indlu yabo bafuna ukuzihlalela bodwa, baphumle, banoxolo oluninzi baze badibane nendalo . Yonke le nto kwi-Dom Victor Condominium yethu.
Indlu enkulu kakhulu enamagumbi okulala ayi-2 kumgangatho osezantsi inegumbi lokulala eliyi-1 (elinye), kunye ne-1 (enye) i-Mezzanine eneebhedi ezimbini kumgangatho wokuqala, kunye nendawo yee-hammock eziyi-2 kwigumbi ngalinye, iveranda enkulu enendawo yee-hammock eziyi-10, igumbi lokuhlambela eliyi-1, i-deck enethoyilethi, i-Barbecue enesitovu seenkuni kunye neoveni yepitsa, i-cable TV, i-Wi-Fi, ifriji, i-deep freezer, i-toaster, umatshini wokwenza ikofu, i-microwave, i-gelagua, indawo yokugcina iwayini, iishawa zombane eziyi-2, izibane zongxamiseko eziyi-15.
Qaphela: (akuvunyelwanga) Ukusetyenziswa kwezandi zemoto, iibhokisi eziphucukileyo, okanye izandi ezinkulu.
Siyakuxabisa ukuqonda kwakho. Iipolisi zeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex!!
Indlu ikwi-3 km ukusuka ePico Alto. 3.5 km ukusuka kudederhu lweentaba.
I-12 km ukusuka kwisikwere esikhulu saseGuaramiranga
Umbuki zindwendwe ngu- Carlos Eduardo
Ifumaneka ukususela ngo-06:00 ukuya ku-22:00.